Pigments avy natiora - La Gomera | Safidy Alemana
ny Nina von Kalckreuth 27. Septambra 2019, 17: 07 9 Votes
Nandritra ny fialan-tsasatra telo herinandro niaraka tamin'ny kitapo tao amin'ny Nosy Canary dia nifanena tamina olona vitsivitsy mahaliana izahay. Indrindra ao amin'ny "hippie nosy" La Gomera dia tsaroako ny fihaonana nandritra ny hitetezana:
Rehefa nidina tany amin'ny tanàna kely iray teo amin'ny nosy izahay dia tsy niandry ela fa hifindra monina sy mandrafitra Meksikana izahay mpifindra monina alemana. Ilay mpifindra monina alemà dia tompon'ny antsoina hoe "Art Residency" antsoina hoe Casa Tagumerche, toerana mahafinaritra izay navela hivelomana malalaka. Ilay artista Meksikana, Liliana Díaz, dia nilaza tamiko momba ny tendron'ny mpanefy iray ho an'ireo olona tia zavakanto: eto amin'ny nosy dia afaka manangona loko / pigment mahafinaritra ianao avy amin'ny cacti sy vato avy amin'ny natiora ary mamolavola azy ireo ary alaivo ny fanaovana azy ireo.
Nony tonga teo amin'ny toeranay Vallehermoso izahay, nandeha dia nanao dia lavitra kely ary nahita ny cactus izay nilazana anay. Avy hatrany dia nirotsaka tany anaty kirihitra aho ary nitsofoka tamin'ny spike.
Tao amin'ny cacti no nanangona kitsoka fotsy kely, izay namboarina ny kactus tamin'ny vovoka fotsy. Rehefa nanangona sy nikiky an'ity vovoka ity ianao dia nahazo loko berry tsara tarehy sy mena izay nataoko handokoana ny andro vitsivitsy. Ny fizotrany dia mitovy amin'ny vato avy any La Gomera - mora miparitaka sy voatorotoro mora. Araka ny nambaran'ilay mpanakanto dia toa "avy amin'ny Mars" ny vato sy ny lokony.
Pejin'ny mpanakanto ao amin'ny La Gomera:
Previous article Fiarovana tontolo iainana ho an'ny # 1 efa mandroso
Lahatsoratra manaraka Fiarovana tontolo iainana ho an'ireo mpampiasa efa mandroso - Tip # 2